Ezona deodorants zibalaseleyo zamadoda kule 2018 | Amadoda aQinisekileyo
Amakhwapha avelisa ivumba nokufuma. Yinyani. Ngethamsanqa, kukho izidambisi, ebesinceda ukuba sigcine ezi ngxaki ziphambi kwethu njengenxalenye yenkqubo yococeko.
Ukusoloko unesinye isandla ngaphandle kwekhaya kunokukunceda ukusombulula ngokukhawuleza imeko eneentloni, ngakumbi emsebenzini. Ke Cinga ngokufumana ubungakanani bohambo kubhegi yakho yamagxa, okanye naphina apho uhambisa khona izinto zakho zobuqu.
1 Ukutshiza, ukunamathela okanye ukuqengqeleka, yeyiphi engcono?
1.1 Iinkonzo kunye neengozi zokutshiza
1.2 Iinkonzo kunye neengxaki zeentonga kunye ne-roll-ons
2 Izinto zokuphelisa into ezingezizo ngokuchasene nendalo
Ukutshiza, ukunamathela okanye ukuqengqeleka, yeyiphi engcono?
Izidambisi zingena ngeendlela ezintathu: ukutshiza, intonga kunye nokuqengqeleka. Ukuba sithelekisa iimveliso ezisemgangathweni, ukusebenza kwazo kuyafana. Kodwa nganye inoluhlu lwezinto ezintle nezingalunganga ezinokukunceda uthathe isigqibo:
Iinkonzo kunye neengozi zokutshiza
Olona ncedo luphambili lokutshiza ngokuthelekiswa nezinye iifomathi kukuba inokusetyenziswa kokubini emakhwapheni nakweliphi na ilungu lomzimba. Ngenxa yoku, amadoda amaninzi azisebenzisa njengokuphela kwevumba kwiimeko ezithile.
Ukuba awunalo ixesha lokuchitha kusasa, izifafazi zokutshiza ziya kukusebenzela kakuhle. Isizathu kukuba zivame ukomisa ngokukhawuleza kuneentonga kunye ne-roll-ons. Ngokubanzi, ukulungele ukuya kwimizuzwana embalwa emva kokuyisebenzisa. Ngapha koko, iimveliso azisazisebenzisi ii-CFCs (chlorofluorocarbons) ekwenziweni kwazo. Oku kutshabalalise umaleko weozone, osikhusela kwimitha yelanga.
Nangona kunjalo, banezinto ezisezantsi zabo. Eyona iphambili mhlawumbi Isidingo sokuyisebenzisa kwindawo engenisa umoyaUkuphefumla ayisiyiyo eyona nto imnandi okanye iluncedo emhlabeni.
Ngokubhekisele kwiimveliso, kuxhomekeke kakhulu kukhetho lwevumba lomntu ngamnye. I-Rexona engabonakaliyo Ice entsha ikalwe kakhulu ngevumba layo elitsha, elihlala likhona imini yonke. Biotherm, Nivea kunye I-Ax (ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha) lolunye uphawu lokutshiza olunezinto zokuhambisa amanzi ekufuneka uthathelwe ingqalelo.
Iinkonzo kunye neengxaki zeentonga kunye ne-roll-ons
Xa kuziwa kwizinti kunye nokuqengqeleka, Amandla ayo okulwa nokubila athathelwa ingqalelo ukuba ngaphezulu nje kokufafaza. Isizathu kukuba bayakuvumela ukuba ufake inani elikhulu lemveliso. Enye indlela abayigqwesa ngayo into yokuhambisa amayeza kukuba akukho ngozi yokuphefumla ngalo lonke ixesha zisetyenziswa.
Ngokubhekele phaya, qaphela ukuba banokushiya intsalela kwimpahla. Kuyimfuneko ukuba uqaphele kulo mba kwaye linda kancinci ngaphambi kokunxiba, ngakumbi xa kufikwa kwizambatho ezimnyama. Oko kuhlala kwanele ukuthintela ukungcoliswa. Okokugqibela, kukho inqanaba layo njengemveliso yendoda enye (inyani yokuba, ngokungafaniyo nepraysi, ayinakubolekiswa okanye kwabelwane ngayo), enokuthi ibonwe njengenzuzo kunye nokungalunganga.
I-L'Oréal Carbon Protect yeyona ndawo idumileyo yokuqengqeleka kwisidambisi. UGillette kunye noSanex phakathi kwexabiso eliphantsi kunye Vichy phakathi kwesiphelo esiphakamileyo zezinye zeeroll-on kunye nezincamathelisi zokuncamathela ezinamahlelo amahle kwimarike.
Izinto zokuphelisa into ezingezizo ngokuchasene nendalo
Mhlawumbi esona sigqibo sibaluleke kakhulu xa uthenga i-deodorant ayisiyo fomathi okanye uphawu, kodwa kukwenziwa kwayo. Izinto zokuhambisa izinto ezingezizo ezenziweyo zibuzwa ngokubanzi. Isiphoso silele nezithako ezinje ngealuminium, parabens okanye iisilicones. Ezi zinokungena ekuhambeni kwegazi ngeengalo kunye nokwakha izihlunu ngokusetyenziswa ixesha elide. Umzimba awufuni zinto, kungumbono olungileyo ukujonga iilebheli ngaphambi kokukhetha i-deodorant, kunye nayo nayiphi na imveliso yococeko.
Izinto zokuthambisa zendalo zithathwa njengezikhuselekileyo. Ngokuqhelekileyo zenziwe ngeetyuwa zamaminerali ezingacaphukisi ulusu. Amakhwapha akho angaqhubeka nokubila, kodwa enza umaleko othintela ivumba elivela kwintsholongwane. Eyona ethandwa kakhulu alum ilitye deodorant. Ububi bayo kukuba kufuneka ubanyibilikise ngamanzi ngaphambi nasemva kwesicelo ngasinye. Ngokufanayo, ilitye kufuneka lomiswe (umzekelo, ngetawuli) ngaphambi kokulibeka.
I-Schmidt's uphawu lwasimahla lwealuminium, ipropylene glycol, iziqholo ezenziwe ngumntu kunye nenkohlakalo yezilwanyana. Inika izidambisi zendalo ezingathathi hlangothi, kunye neziqholo ezahlukileyo zendalo, ezinjengekalika kunye nebergamot. Unokukhetha phakathi kwebhalsam okanye intonga eqhelekileyo.
Ityuwa yomhlaba, iBiotherm okanye iSaltz zezinye Iimpawu ezibonisa ngokucacileyo ukuba i-deodorants ayinayo i-aluminium okanye i-parabens. Xa kuthelekiswa neziyobisi eziqhelekileyo, amaxabiso abo aphezulu kakhulu. Ngaba kufanelekile ukutyala imali? Kubantu abaninzi, ewe, kuba ukubheja kwiziyobisi zendalo sisigqibo esifanelekileyo kwimpilo. Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba nangona iyanceda, akwanelanga ukuphelisa ngokupheleleyo iikhemikhali. Lo ngumsebenzi ongenakwenzeka, kuba mihla le siphila esichengeni senani labo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Zokuthambisa » Ezona deodorants zibalaseleyo emadodeni